Sida loo xaliyo dhibaatada APPCRASH | Androidsis
Sidee loo xaliyaa dhibaatada APPCRASH
Ignacio Sala | 25/08/2021 22:00 | Tababarada
Si loo xaliyo dhibaatada APPCRASH ee daaqadaha, waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan ogaano waa maxay waxyaabaha saameeya qalabkayaga ama nooca nidaamka qalliinka ee aan rakibnay, maadaama aysan ahayn khalad caadi ah oo 100% waqtiga dhibka waxaa laga helaa kooxdayada, ma aha nidaamka hawlgalka.
Marka codsi aan ku rakibnay kombiyuutarkeena, uu si lama filaan ah u joojiyo shaqada isagoo aan furin wakhti kasta, Windows wuxuu na tusayaa farriin nagu wargelineysa in arjiga shaqadii way joojisay iyo in aad xal ka raadin karto internetka.
Haddii dhibaatadu la xiriirto nidaamka qalliinka (dhibaatooyinka noocaan ah waxay u badan tahay inay ku dhacaan noocyada beta), si dhakhso ah ayaa na tusi doona xal.
Si kastaba ha noqotee, marka lagu jiro faahfaahinta dhibaatada, erayga APPCRASH waxaa lagu faahfaahiyay magaca dhacdada dhibaatada, xalka waligeen kama heli doonno server -yada Microsoft, laakiin kooxdayada.
Haddii aad rabto inaad ogaato sida loo xaliyo dhibaatada APPCRASH ee daaqadaha, waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno waa inaan aqoonsanno dhibaatada, maadaama farriimaha Windows -ka ee ina tusaaya dhibaatada arjiga, mar walba kuma xidhna.
1 Tani waa dhibaato APPCRASH
2 Cusboonaysii Windows
3 Dami antivirus
4 Dhibaatooyinka qalabka
5 Maktabadaha ayaa maqan
6 Sahli Fursadaha Waxqabadka
Tani waa dhibaato APPCRASH
Haddii runtii aan la kulanno dhibaato noocan ah, farriintu waxay na tusi doontaa nuxur la mid ah kuwa soo socda:
Magaca Dhacdada Dhibaatada: APPCRASH
Magaca Codsiga: ck2.exe
Nooca App: 1.0.0.0
Xilliga Codsiga: 52d7ad9f
Ciladaha magaca moduleka: MSVCP100.dll
Khaladaadka nooca moduleka: 6.0.6001.18000
Cilad-xumaynta jadwalka waqtiga: 4791a7a6
Koodhka ka reeban: c0000135
Ka-dhaafitaan ka-reebis: 00009cac
Nooca OS: 6.0.6001.2.1.0.768.3
Aqoonsiga Goobta: 3082
Macluumaad dheeraad ah 1: 9d13
Macluumaad dheeraad ah 3: 9d13
Sida aan ku arki karno safka koowaad ee faahfaahinta khaladka, magaca dhacdada uu Windows adeegsado si loo garto waa APPCRASH. Iyadoo la raacayo aqoonsiga dhibaatada, faahfaahinta sidoo kale codsiga la fulin karo waa la muujiyaa kaas oo bixiyay qalad, kaas oo kiiskan ah ck2.exe.
Xogta inteeda kale ee aad na siiso, waan iska indho tiri karnaa, mar haddii aanan haysan aqoontii ku habboonayd, marnaba ma awoodi doonno inaan ogaanno waxay ka dhigan tahay, waxay ka dhigan tahay iyo sida loo xaliyo. Nasiib wanaag, dhibaatadani waxay leedahay xalal kala duwan, dhammaantoodna aad bay u fududahay in la fuliyo.
Waxa ugu horreeya ee la sameeyo haddii aan la kulanno dhibaatadan, haddii ay tahay Windows 10, waa in la cusboonaysiiyaa nooca ugu dambeeya ee la heli karo ee Microsoft sii daayay. Haddii dhibaatadani la xiriirto qaar ka mid ah shilalka Windows, dhibaatada APPCRASH, waa inaan dib loo soo bandhigin.
Haddii qaladkani sii socdo, waa inaan sii wadnaa raadinta xalka hababka aan hoos ku tusno. Haddii kombiyuutarkaaga lagu maamulo Windows 8.x ama ka hor, Microsoft mar dambe ma taageerto noocyadan, markaa waa inaad isku daydaa inta kale ee xalka ah ee aan ku tusno maqaalkan.
Windows 1st wuxuu asal ahaan isku daraa Difaacaha Windows, mid ka mid ah antivirus -yada ugu wanaagsan ee loo heli karo Windows, iyo sidoo kale waa lacag la'aan oo waxaa dayactira maalin walba Microsoft. Haddii aad rakibto antivirus dhinac saddexaad ah, waa inaad marka hore demisaa Difaacaha Windows, maadaama haddii kale midna kan kale uusan shaqaynayn.
Antivirus -ka ayaa mararka qaarkood sababa isku dhacyada arjiga. Haddii aan rabno inaan soo dejino in dhibaatada APPCRASH ay sabab u tahay isku -dheelitir la'aanta suurtogalka ah ee antivirus -ka ama waxaad si khaldan u fasiraysaa xeerarka fulinta, waa inaan demi -gelinno oo dib u bilownaa kombiyuutarka.
Marka kumbuyuutarku dib u bilowdo, iyada oo antivirus -gu naafo yahay, waa inaan mar kale wadnaa codsiga. Haddii ay sii socoto inay muujiso isla dhibaatadaas, waa inaan isku daynaa xal kale, maadaama antivirus uusan sabab u ahayn dhibaatada.
Dhibaatooyinka qalabka kombiyuutarka ayaa badanaa lala xiriiriyaa daaqadda buluugga ah ee dhimashada ee Windows. Si kastaba ha ahaatee, waxaa sidoo kale jira suurtogalnimada inay saamaynayso hawlgalka codsi gaar ah, gaar ahaan haddii ay leedahay isticmaal qayb aan si fiican u shaqaynayn.
Tusaale ahaan, haddii codsiga wicitaanka fiidiyaha had iyo jeer xidhmo markaan bilowno. Waxa ugu horreeya ee la sameeyo waa isku day codsi kale. Haddii labaduba na siiyaan qalad isku mid ah, dhibaatadu waxay u badan tahay kamarada webka. Xalka ugu fudud ee kiisaskaan waa in la iibsado mid dibadda ah, gaar ahaan haddii uu yahay laptop ama moobiilka loo isticmaalo kaamirooyinka webka.
Si meesha looga saaro inay tahay dhibaato qalab, waa inaan kombiyuutarkeena ku bilownaa Hab Nabdoon. Qaabkani ma raro mid ka mid ah darawalada qaybaha qalabka, sidaa darteed haddii codsigu u shaqeeyo dhibaato la'aan, dhibaatada laga helay hardware ama software, inkasta oo ikhtiyaarka dambe uusan macquul ahayn.
Maktabadaha ayaa maqan
Waxaa laga yaabaa in dhibaatada APPCRASH ay tahay inaan ka maqanahay maktabadaha qaar ee arjiga ama nidaamka laftiisa. Codsiyada waxay u baahan yihiin maktabado (.dll files) oo laga helay Windows si uu u shaqeeyo.
Haddii mid ka mid ah maktabadahaan aan la helin, arjiga marna ma furi doono wuxuuna na tusi doonaa farriin qalad ah, qalad laga yaabo inuu yahay midka aan isku dayeyno inaan xalino. In kasta oo Windows 10 rakibto mid kasta iyo mid kasta oo ka mid ah maktabadaha oo mar uun laga yaabo in loo baahdo, haddii aad haysato kombiyuutar duug ah oo aan maamulin Windows 10, waa inaad iyaga rakibtaa.
Microsoft .NET Framework waa a xirmada maktabadda inta badan codsiyada ayaa u baahan oo maxaan kari karnaa ku soo dejiso xiriiriyahan. Microsoft DirectX, si aad uga faa'iidaysato garaafyada kooxdayada, waa mid kale oo aan awoodno ku soo dejiso xiriiriyahan.
Sahli Fursadaha Waxqabadka
Xalka aan had iyo jeer ka shaqeynin xallinta dhibaatada APPCRASH waa in la dhaqaajiyo xulashooyinka waxqabadka. Doorashadan ayaa u oggolaanaysa isticmaalaha ka difaac fayruusyada iyo hanjabaadaha kale inta codsiyada ay socdaan falanqaynta dhammaan hababka arjiga inta uu socdo.
Doorashadan naafo ahaan naafo yahay, sidaa darteed waa inaan dhaqaajino si aan u tijaabino haddii aan xallin karno dhibaatadan. Si loo dhaqaajiyo Ikhtiyaarada Waxqabadka, waxaan fulinaa tallaabooyinka soo socda:
Ugu horreyntii, waxaan furaynaa faylka sahaminta, waxaan gelineynaa jiirka Equipo, taabo badhanka midig oo xulo Propiedades.
Guryaha gudahooda, waxaan marin u helnaa Dejinta Nidaamyada Sare - Fursadaha Sare.
Gudaha xulashooyinka horumarsan, guji Waxqabadka - Ka Hortagga Fulinta Xogta.
Ugu dambeyntii, waxaan doorannaa sanduuqa U oggolow DEP dhammaan barnaamijyada iyo adeegyada marka laga reebo kuwa aad doorato: oo waxaan doorannaa arjiga soo bandhigaya dhibaatooyinka hawlgalka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Sidee loo xaliyaa dhibaatada APPCRASH
Codsiyada ugu fiican ee lagu soo koobo qoraallada ku yaal Android
Beddelka ugu fiican ee AirPlay ee loogu talagalay Android